Ny fitsaboana ny tsindry dia fanasitranana mahomby ho an'ny aretina isan-karazany sy fanaintainan'ny fanaintainana. Ny onjan-tsindry dia miteraka microtrauma any amin'ny faritra voatsabo, izay mamerina ny neo-vascularization (fandatsahan-dra vaovao) ao amin'ny faritra. Aza misalasala mifandray aminay Facebook pejy ny ato aminay na ny tsikera amin'ny faran'ny lahatsoratra raha manana hevitra, fanehoan-kevitra na fanontaniana momba ity fomba fitsaboana ity ianao.
Izy io dia ny fizotra ra vaovao izay mampiroborobo ny fanasitranana ao amin'ny sela. Ny fitsaboana ny onja amin'ny alàlan'ny tsindry dia manentana ny fahafahan'ny vatana manasitrana ny aretin-kozatra sy ny hozatra amin'ny alàlan'ny famotehana ilay sela simba izay soloina hozatra na taolana vaovao na salama.
Ny fitsaboana ny onja amin'ny tsindry dia novolavolaina tany Suisse ary voaporofo fa fomba mahomby ho an'ireo marary manana aretina mitaiza, misoroka ny fampiasana ny fandidiana, ny tsindrona kortisone na ny fampiasana fanafody. Noho izany ny fitsaboana dia tsy misy fiantraikany amin'ny lafiny iray, afa-tsy ny fizotran'ny fanasitranana ihany dia mety ho marary mafy sy maharary.
Ahoana no fomba itondrana ny fitsaboana ny tsindry?
Voalohany indrindra dia hanamarina ilay aretina ny mpitsabo, hamaritra izay misy ny fanaintainana ary hanoratra an'io. Avy eo ny protokolan'ny klinika dia ampiasaina amin'ny olan'ny tsirairay (ohatra, avy eo tsaboina plantar fascia miaraka am-basy 2000 misy fizahana 15mm).
Mihevitra izahay fa tena mampiseho sary an-tsaina ny mampiseho anao amin'ny fomba feno amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny onjan-drivotra manohitra ny fitiliana ny fambolena plantar fascitis. Ity fitiliana matetika ity dia ampitahaina amin'ny antony maromaro, fa ny zava-misy dia ny takelaka tendon eo amin'ny sisin'ny ny tongotr'akanjony ary eo alohan'ny hazondam-bavony dia mihintsana ary misy fahasimbana tsy mety maty. Ity tranobe simba ity dia manana fahatsapana fanaintainana lehibe kokoa (mamoa marika fanaintainana bebe kokoa), tsy dia miasa firy raha mifehy ny fihenan-tsasatra sy famindrana ny lanjany, ary ny fery simba kosa dia nampihena ny fizahan-dra sy ny fahasitranana. Ny fikorianan'ny onjan-tsindry dia manapaka ny tavy simba (izay tsy tokony ho eo) ary manomboka ny fanamboarana izay miverina tsikelikely ny fikolokoloana azy.
Lahatsary - Fitsaboana onja amin'ny alàlan'ny Plantar fasciitis (tsindrio ny sary raha hijery ny horonantsary)
loharanom-baovao: Fantsona YouTube. Aza adino ny misoratra anarana (maimaim-poana) raha te hanana fampahalalana bebe kokoa sy horonan-tsary tsara. Miarahaba ihany koa izahay momba ny soso-kevitr'ity horonantsary manaraka ity.
Vakio koa: - Ahoana no fomba hialana amin'ny plantar fasite
Azontsika atao tsara ny manome soso-kevitra ny lahatsoratra etsy ambony - nosoratan'ny mpitsabo aretin-tsaina iray ao amin'ny tobim-pianarana interdisiplinary Råholt Chiropractor Center (Kaominina Eidsvoll, Akershus).
Ny fitsaboana dia atao mihoatra ny fitsaboana 4-12, arakaraka ny faharetan'ny olana sy ny tanjaky ny olana, misy eo amin'ny 1 herinandro eo ho eo. Amin'ny fitsaboana taty aoriana, mety ara-dalàna ny manana lava kokoa eo anelanelan'ny fitsaboana noho ny fizotry ny fanarenana. Ny fitsaboana iray dia mety ahitana 2-3000 fikorontanana / onja faneriterena - izany hoe tsy onjam-peo ankehitriny na onjam-peo.
Zava-dehibe fa ny fitsaboana ny tsindry dia tsy tanterahina matetika amin'ny indray mandeha isan-kerinandro ary avela handeha mandritra ny 1 herinandro eo anelanelan'ny fitsaboana tsirairay - izany dia ny mamela ny valin'ny fanasitranana amin'ny fotoana mila miasa miaraka amin'ny tavy dysfunctional.
Sahala amin'ny fitsaboana hafa, ny malemy fanahy dia mety hitranga, ary izany dia matetika noho ny antony mahatonga ny fiovan'ny hozatra.
- Amin'ny tranga sasany dia mety maharitra 6-8 herinandro alohan'ny hahitanao ny fanasitranana tanteraka aorian'ny fitsaboana ny onja amin'ny tsindry, saingy maro no mahatsikaritra ny vokatra tsara manala ny fanaintainana taorian'ny fitsaboana 2-3. Ny iray dia tokony hiresaka ihany koa ny tena antony naratra mba tsy hiverimberenana na hitera-doza.
Onjan'ny fanerena amin'ny aretina mitaiza
Ny aretina mitaiza dia ratra iray izay nijanonan'ny rafitra fanasitranana voajanahary ao amin'ny vatana ny fitsaboana azy. Raha atao teny hafa, dia afaka miteny ny olona iray fa "nilavo lefona" ny vatana.
Ny onja mahery vaika avo lenta dia miditra ao anaty sela simba ary miteraka microtrauma - mamaly izany ny vatana amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny rà mandriaka sy ny metabolisma manodidina izay adika ho toy ny faritra maratra. Io indray dia manentana ny fahafahan'ny vatana manamboatra tena. Matetika ny fanamaivanana ny fanaintainana eo noho eo ary noho izany dia nanatsara ny hetsika efa vita taorian'ny fitsaboana 1-3.
Inona no azo jerena amin'ny fitsaboana amin'ny tsindry?
Ny fitsaboana ny tsindry dia afaka mitsabo, ankoatra ny zavatra hafa:
- Achilles Tendon Olana
- Ratra ateraky ny tongotra / plantar fascite (ratra amin'ny tendon amin'ny plantar fascia) & ombelahin-tongony mandrisika (sokay eny am-baravarana mitarika ny tendan'ny tadivavarana amin'ny tendon-tenda)
- Rantsam-bazony (capsulite adhesive ao amin'ny andilana)
- Soroka matevina (capsulite adhesive ao amin'ny soroka)
- Sambo golf (medial epicondylitis)
- Ireo lohalika mandondona - fanaintainana eo ambanin'ny patella
- sokay-piraisan (fikajiana ao amin'ny soroka iray na maromaro ao amin'ny soroka)
- totozy sandry
- Ny lohalika mandohalika (lohalika mihazakazaka) - fanaintainana amin'ny patella ao amin'ny fametahana quadriceps
- Tendon ratra sy tendonitis
- Fanaintainana amin'ny soroka amin'ny tendinosis (ratra amin'ny tendona) ary tendinitis (tendonite)
- Tenisy elika / epicondylite aoriana
- Fanaintainana ao am-balahany
Ny fitsaboana ny tsindry dia nanisy tahirin-kevitra momba ny ratra amin'ny tendon sy ny olana eo amin'ny ratra eo amin'ny vatana (ohatra, ny fofom-boasary eo ambanin'ny ravin'ny tongotra). Ny endrika fitsaboana dia manana porofo tsara ihany koa rehefa tonga ny fitsaboana sy ny fanimbana ny fika tenda (ohatra, katsimo soroka ary spore manontolo).
Fandalinana (fikarohana): Ny fitsaboana ny tsindry dia mahomby amin'ny fitsaboana ny soroka miendrika / soroka mangatsiaka / capsule capsulite
Hikapoka amin'ny soroka mando? Avy eo ny fikarohana dia mampiseho fa tokony andramana ny fitsaboana ny tsindry ianao hanafaingana ny fomba fanasitranana ity fanaintainana maharitra ity izay mety haharitra raha tsy maharitra 1-2 taona tsy misy fitsaboana. Ny fanadihadiana iray navoaka tao amin'ny gazety an-gazety International Journal of Preventative Medicine dia nampiseho fa ny fitsaboana 4 nandritra ny 4 herinandro dia nahatonga ny fanatsarana klinika amin'ny hetsika soroka ary ny olona dia niverina tamin'ny asany isan'andro. Manoro hevitra izahay fa vita miaraka amin'ny fanazaran-tena amin'ny soroka matevina ary eo ambanin'ny tohin'ny mpitsabo nahazo alàlana ho an'ny daholobe (physiotherapist, mpitsabo, kiropraktika na mpitsabo momba ny torolàlana).
Fianarana (fikarohana): Ny fitsaboana ny onja amin'ny tsindry dia voarakitra ara-pahasalamana amin'ny fitsaboana ny plantar fasciitis mitaiza
Raha ny fanadihadiana lehibe / meta-analysis (endrika fikarohana mahery vaika), dia tapa-kevitra aho fa:
"Ny fitsaboana ny tsindry dia ny fitsaboana mahomby sy azo antoka ho an'ny fasciitis fambolena mitaiza." (Aqil et al, 2013)
Saingy araka ny nosoratan'izy ireo - amin'ny tranga henjana dia mety haharitra 12 herinandro (sy fitsaboana 12) alohan'ny hahitanao ny fahasamihafana lehibe. Noho ny tsy fahampian'ny fampahalalana avy amin'ny tobim-pitsaboana dia maro noho izany ireo mararin'ny aretina mitaiza sy miharatsy kokoa ao amin'ny vatan'ny tendon eo ambanin'ny tongotra izay milavo lefona aorian'ny fitsaboana 4-5 ihany. Raha ny marina dia tena azo inoana izy ireo, noho ny zava-misy fa matotra kokoa noho ny mahazatra ny famaritana azy ireo, dia nila fitsaboana betsaka kokoa nandritra ny fotoana lava kokoa.
Rehefa fantatrao ny fomba fiasan'ny fikolokoloana onja, izay nantitranterina ihany koa tamin'ny fikarohana natao, dia tsapanao fa tsy azo atao ara-batana ny onjan-tsindry raha tsy misy fiatraikany amin'ny tonon-taolana efa simba. Izy ireo dia manapotika, voaporofo, simba ary tsy mandeha amin'ny hozatra ary miteraka valiny fanasitranana lehibe ao amin'ilay faritra. Ny olana tokana dia ny tsy maintsy averina mandritra ny fitsaboana maro ny fizotrany - ary avy eo amin'ny tranga maro dia maro ny fitsaboana 5-8 voamarina fa maro no manandrana alohan'ny hilavoany.
Araho ny Vondt.net amin'ny YOUTUBE
(Manaraha sy manome hevitra raha tianao ny hanaovanay horonantsary misy fanazaran-tena na fanazavan-kevitra voafaritra tsara momba ny olanao)
Araho ny Vondt.net amin'ny FACEBOOK
(Miezaka ny hamaly ireo hafatra sy fanontaniana rehetra ao anatin'ny 24-48 ora izahay. Afaka manampy anao handika ny valin'ny MRI sy ny toy izany koa ianao.)
Aqil et al. Ny fitsaboana Therapy Wave Extracorporeal dia mahomby amin'ny fitsaboana ny plantar fasciitis mitaiza: Meta-analysis an'ny RCTs. Clin Orthop Relat Res. 2013 nov; 471 (11): 3645–3652. Navoaka an-tserasera 2013 Jun 28.
Vahdatpour et al, 2014. Fahombiazana ny fitsaboana fanafody Extracorporeal Shockwave ao amin'ny alàlan'i Frozen. Int J Prev Med. 2014 Jul; 5 (7): 875-881.
FAQs misy ifandraisany:
Aza misalasala mampiasa boaty fanamarihana etsy ambany na mandefa hafatra manokana aminay amin'ny alàlan'ny media sosialy) raha manana fanontaniana ianao.
Mampidi-doza ve ny fitsaboana tsindry?
Tsia, tsia tokoa - fa toy ny fitsaboana nentin-drazana hafa ihany koa, ny fitsaboana ny onja amin'ny tsindry dia mety hiteraka fahalemem-panahy sy fanaintainana vetivety satria manimba ara-batana ny vatana ary manomboka manamboatra dingana ao amin'ilay faritra. Ara-dalàna tanteraka ny halemem-panahy toy izany raha te haharitra hatramin'ny 24-72 ora aorian'ny fitsaboana ara-batana.
Nanana ny tendonitis teo amin'ny soroka. Azo tsaboina amin'ny fitsaboana amin'ny tsindry?
Araka ny voalaza tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, dia misy diagnostika be loatra momba ny ratra amin'ny tendon, matetika, antsoina hoe tendonitis. Ny fikarohana dia naneho fa somary mahalana kokoa ny mahazo ratra amin'ny tendon noho ny tendonitis. Fa ny valiny dia, eny, ny fitsaboana ny onja amin'ny tsindry koa dia azo ampiasaina hanohitra ny diagnostika izay miafara -ittâ (ohatra, tendinitis supraspinatus, tendonitis amin'ny soroka, na plantar fasciitis).
Iza no manao fitsaboana amin'ny tsindry?
Ny fitsaboana dia tokony hataon'ny vondrona matihanina nahazo alalana ampahibemaso (mpitsabo aretin-tsaina, mpitsabo kiropraktika na mpitsabo tanana) miaraka amin'ny fahaizana manokana amin'ny fanombanana sy fitsaboana ny aretina amin'ny hozatra, tonon-taolana, tendon-taolana sy hozatra. Ny fahazoan-dàlana ho an'ny fahasalamam-bahoaka dia mitaky anaram-boninahitra voaaro ary tombo-kase avo lenta avy amin'ny manampahefana ara-pahasalamana norveziana ary miantoka ny zonao sy ny fiarovana anao amin'ny maha-marary anao - izany no antony anoloranay hevitra voalohany ny fanombanana sy ny fitsaboana ireo vondron'olona manana lohanteny voaaro (amin'ny teny hafa, tsy ara-dalàna ny fiantsoana mpitsabo aretin-tsaina na mpitsabo aretin-tsaina raha ny iray dia tsy - tsy toy ny vondrona mpiasa hafa izay tsy voaaro ary afaka miantso ny tenany ny olon-drehetra). Manome tolo-kevitra an-jatony amin'ny tranokala fitsaboana izahay amin'ny alàlan'ny hafatra tsy miankina amin'ny media sosialy mandritra ny taona - noho izany afaka malalaka ianao hifandray aminay raha mitady mpitsabo manam-pahaizana eo an-toerana sy mahay ary manam-pahefana ianao.
20/10/2015 at 14:53
Salama! Te hahita mpitsabo mahay any Copenhague aho na. manodidina izay mampiasa onja fanerena ho an'ny aretin'ny hozatra sy ny hozatra. Afaka manoro olona ve ianao? Vh Torill
Arahaba ry Torill,
Ho hitanay ho anao izany.
Tahaka izany, dia nahazo tolo-kevitra momba ny "The clinic on Toftegårds Allé" izahay.
Adiresy: Toftegårds Alle 7, 1. th
Valby, Copenhague, Danemark
Mirary anao ho tsara vintana! 🙂
Ola Nordmann hoy:
20/06/2016 at 02:16
Raha mitovy amin'ny onjam-panafintohina izany, dia betsaka kokoa noho ny fantatry ny maro no mitranga.
Nahazo onjan-taitra teo amin'ny tongotra lehibe aho noho ny tendany sy ny hozatra izay nisintona ny rantsan-tongotra tamin'ny toerana tsy mety noho ny fandatsahan-drà tao amin'ny atidoha niaraka tamin'ny paralysis antsasany.
Nanomboka niverina indray aho tamin’ny farany, ka afaka nahatsapa hozatra iray isaky ny mandeha.
Noho izany dia nanitatra ny onjam-panafintohinana izahay teo ambanin'ny tongotra manontolo, ary nisy zavatra tsy mampino nitranga teo amin'ny ilany havanana. Hatramin'ny sofiko dia lasa tsara be aho. Saingy mety haharitra hatramin'ny herinandro 1 vao nahatsikaritra fiovana aho.
Nandritra ny herinandro maro. Nahazo otra 1 ora koa izay tena nanombohana ny vatana, ka sady haingana no nanetsika ny tena.
Na dia aorian'ny 5-6 taona aza, miaraka amin'ny fanamafisana herinandro vitsivitsy, dia tonga ny vokatra tsy mampino. Saingy tsy misy fanohanana, mandoa ny zava-drehetra amin'ny tenanao, satria tsy misy fianarana momba izany raha oharina amin'ny marary tapaka lalan-dra farafaharatsiny.
Saingy lasa tsara kokoa aho avy eo 🙂
Mona Estilrønningen hoy:
13/09/2016 at 06:26
Salama ! Voamarina fa voan'ny plantar fasciitis eo ho eo. 3 taona amin'ny tongotra havia ary 1/2 taona amin'ny havanana. Efa naroson'ny dokotera ve ny onjan'ny tsindry ary efa notakiana tamin'izany, fa iza no manao izany amin'ny faritra akaiky ahy?
13/09/2016 at 12:00
Avy eo dia mila ny faritra misy anao izahay mba hahafahanao manome soso-kevitra momba izany.
Heidi Winther Nylund hoy:
Aiza ho aiza eto amin'ny firenena no ahafahana manao izany? Mipetraka any Bodø aho?
Nicolay v / Vondt.net hoy:
10/01/2017 at 14:19
Afaka manao izany ny ankamaroan'ny mpitsabo kiropraktika sy ny mpitsabo amin'ny tanana - misy ihany koa ireo mpitsabo ara-batana maro mampiasa an'io fomba fitsaboana io. Manoro hevitra izahay mba hifandray amin'ny toeram-pitsaboana akaiky anao ary anontanio raha toa izy ireo no manolotra ity fomba fitsaboana ity. Mirary anao ho tsara vintana.
Laila espeseth hoy:
28/01/2017 at 22:14
Nilaza ny mpitsabo ahy fa manana mucositis amin'ny lohaliko aho. Inona izany ary ny fomba fitsaboana azy?
28/01/2017 at 23:08
Infrapatellar bursitis dia aretina azo atao. Aiza ny mucositis? Aiza ny fivontosana?
01/04/2017 at 10:22
Manontany tena raha atolotra eo amin'ny seza ny fitsaboana amin'ny onjan'ny tsindry? Henjana, ary mafy taolana ao amin`ny seza, ka tsy azo atao ny manitsy ny lamosina. Miolikolika tanteraka, ka naratra tamin'ny toerana maro. Misaotra mialoha amin'ny valin-teninao.
01/04/2017 at 15:56
Eny, ampiasaina amin'ny tendinosis sy ny tendinopathies amin'ny andilany, ankoatra ny zavatra hafa. - fa azo ampiasaina koa amin'ny piriformis syndrome eo amin'ny seza. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny piriformis dysfunctional dia hitranga foana miaraka amin'ny dysfunction pelvic- Noho izany, mandehana any amin'ny mpitsabo manam-pahefana (chiropractor na mpitsabo) mba hahafahanao mamaha ny hozatra sy ny tonon-taolana amin'ny olanao.
Soa zao ra.
Marit Khelifi hoy:
05/09/2017 at 22:44
Ahoana no ifandraisan'io fitsaboana io amintsika amin'ny fibromyalgia?
08/01/2018 at 20:22
Salama, manao ahoana ity fitsaboana ity raha mifandray amin'ny fahasosorana sy ny osteoarthritis amin'ny kitrokely?
Elin Sollie hoy:
26/11/2018 at 22:08
Ahoana no fiasan'io, ohatra, ny tendany, ny soroka aorian'ny concussion? Aiza ny tendany (karavasy sy karavasy) nahazo tsindry tamin'ny fikapohana ny lohany. Efa nisy fitsaboana toy izany tamin'ny Plantar fasciitis taloha ary nanampy izany.
Nicolay ao amin'ny Vondt.net hoy:
14/12/2018 at 13:41
Ny fitsaboana amin'ny onjam-pandrefesana dia azo ampiasaina amin'ny dysfunctions muscular sy myalgias amin'ny soroka sy ny hozatra mifandray amin'ny tendany (ohatra, ny hozatry ny trapezius ambony sy ny levator scapulae).
Tena zava-dehibe ihany koa ny fifantohanao ambony amin'ny fampiofanana momba ny fahamarinan-toerana amin'ny tendany sy ny soroka mba hanomezana fanohanana ireo faritra maratra.
Ny fitsaboana amin'ny onjan'ny tsindry dia tsy tokony hataon'ny matihanina ara-pahasalamana nahazo alalana ampahibemaso ihany - toy ny physiotherapist na chiropractor.
Salama! Mahazo fitsaboana onjam-pandrefesana aho amin'ny plantar fasciitis amin'ny tongotra, aorian'ny fitsaboana dia mahazo fanaintainana kely amin'ny loha aho ary mahatsapa ny ugg. Saika mitovy ny fihetseham-po toy ny taorian'ny sidina lava na aretin'ny fiara. Normal ve izany?
Nicolay v / Tsy ahita hoy:
Ara-dalàna izany raha misy plantar fasciitis manan-danja - izany dia noho ny fanehoan-kevitry ny fahasimbana voafehy eo amin'ny tongotra sy ny fahatapahan'ny tavy simba.
Mba hanoherana izany fahatsapana izany, dia manoro hevitra ny hisotro rano fanampiny ianao amin'ny andro iray amin'ny fitsaboana - ary ny ampitson'iny.
Mirary soa sy fahasitranana tsara!
Te-hanatevin-daharana ny resaka?
Aza misalasala ny handray anjara!
Mametraha hevitra Fofoanana ny valiny
Tsy havoaka ny adiresy mailakao. Ny saha tsy maintsy atao dia voamarika *
Tehirizo ny anarako, ny mailaka ary ny tranokalako amin'ity navigateur ity amin'ny fotoana manaraka.